ज्योति बनिन् ‘मिस क्विन लेखनाथ’- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
ज्योति बनिन् ‘मिस क्विन लेखनाथ’
लेखनाथ — तेस्रो ‘मिस क्विन लेखनाथ’ को उपाधि ज्योति खत्रीले जितेकी छन् । यहाँ शनिबार भएको फाइनलमा उनले सात प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारिन् । फस्ट रनरअप सब्रिना ओली र सेकेन्ड रनरअप दीपा आचार्य भए । ज्योतिले पुरस्कारबापत स्कुटर पाइन् । फस्ट र सेकेन्ड रनरअपले क्रमश: ५० हजार र ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
तेस्रो ‘मिस क्विन लेखनाथ’ को उपाधि ज्योति खत्रीले जितेकी छन् । यहाँ शनिबार भएको फाइनलमा उनले सात प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारिन् ।
फस्ट रनरअप सब्रिना ओली र सेकेन्ड रनरअप दीपा आचार्य भए । ज्योतिले पुरस्कारबापत स्कुटर पाइन् । फस्ट र सेकेन्ड रनरअपले क्रमश: ५० हजार र ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
लेखनाथ क्षेत्रकै एक मात्र ब्युटी कन्टेस्टमा १६–२५ वर्षका युवतीले भाग लिन पाउने प्रावधान छ । देखावटी सुन्दरता मात्र नभएर व्यक्तित्वसहितको सुन्दरतामा निखारता ल्याउने उद्देश्यले प्रतियोगिता गरेको संयोजक सन्दीप पौडेलले बताए ।
लेखनाथ मिडिया हाउसको आयोजना, फोटोमण्डलको सहआयोजना र सेभेन मिडिया नेटवर्कको इभेन्ट व्यवस्थापनमा प्रतियोगिता भएको हो । प्रतियोगितामा पूर्वमिस पोखरा रजनी केसी, जंक्सन डटकमका प्रबन्ध निर्देशक भूपाल गुरुङ, कलाकार अम्बर सुवेदी, प्रा. जितेन्द्र थापा निर्णायक थिए ।
अजित र शहनाज भए ‘मिस्टर एन्ड मिस कल्चर एन्ड टुरिज्म’
दमौली — पहिलोपटक यहाँ आयोजित मिस्टर एन्ड मिस कल्चर एन्ड टुरिज्म प्रतिस्पर्धामा अजित घर्तीमगर र सहनाज शेख विजेता भएका छन् ।
संस्कृति संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै आयोजित प्रतिस्पर्धामा उल्लेख्य संख्यामा तन्नेरीहरू सहभागी भए । मिस कल्चरको उपाधि विजेता शेखले पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने चाहना रहेको बताइन् । ११ कक्षाकी विद्यार्थीले पुरस्कारबापत ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिन् । उनलाई ‘मिस पोखरा’ ममता जोशीले ताज लगाइदिएकी थिइन् ।
मिसतर्फ नै कञ्चन दुरा फस्र्ट रनरअप र शिल्पा थापामगर सेकेन्ड रनरअप भए । उनीहरूले क्रमश: १५ हजार र १० हजार रुपैयाँ पाए ।
मिस्टरतर्फका विजेता घर्तीमगरले जिल्लामा जातजातिको संस्कृति संरक्षणका लागि काम गर्ने रहर भएको बताए । यसमा मनोज आलेमगर फस्र्ट रनरअप र मनोज थापा सेकेन्ड रनरअप भए ।
साकार होला 'फिल्म सिटी' सपना?
’लम्फू’ को फस्टलुक
खोज पत्रकारितामा ‘स्पटलाइट’
यस्तो भयो ग्याल्बो ल्होसार
‘दोस्रो सातादेखि नाफामा’